Tokony hanangana na hividy ny sehatra fivarotana manaraka anao ve ianao? | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 16, 2014 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay, nanoratra lahatsoratra nanoro hevitra ireo orinasa aho tsy hampiantrano ny lahatsarin'izy ireo manokana. Nisy ny fihemorana kely avy aminy avy amin'ireo teknisiana sasany izay nahatakatra ny fidiran'ny fampiantranoana video. Nanana teboka tsara izy ireo, saingy mitaky mpijery ny horonan-tsary, ary maro amin'ireo sehatra nampiantrano no manome an'izany. Ka ny fampifangaroana ny vidin'ny bandwidth, ny fahasarotan'ny haben'ny efijery ary ny fifandraisana, ankoatry ny fisian'ny mpihaino no antony voalohany nahatonga ahy.
Tsy midika izany fa tsy mino aho fa ny orinasa dia tokony tsy hijery lavitra intsony amin'ny fananganana ny vahaolana. Mikasika ny vidéo, ohatra, orinasa lehibe maro no nanakambana ny paikadim-pirenenan-dry zareo fitantanana fananana nomerika rafitra. Mahatonga saina tonga lafatra!
Folo taona lasa izay raha lafo tokoa ny fahefana informatika, lafo ny fampiasa amin'ny bandwidth, ary tokony hatao hatramin'ny voalohany ny fampandrosoana, tsy tokony ho famonoan-tena ho an'ny orinasa iray ny manandrana manangana ny vahaolana marketing. Ny rindrambaiko amin'ny maha-mpanome serivisy dia nandany vola an'arivony tapitrisa tamin'ny indostria hamolavola sehatra izay azon'ny ankamaroantsika ampiasaina - koa maninona ianao no hanao an'io fampiasam-bola io? Tsy misy valiny aminy ary ho tsara vintana ianao raha toa ka tafidina amin'ny tany ianao.
Mandrosoa haingana anio, nefa, be ny herin'ny compute sy ny bandwidth. Ary ny fampandrosoana dia tsy mila atao amin'ny volo. Misy sehatra fampivoarana haingana mahery, sehatra fitehirizana angon-drakitra angon-drakitra lehibe, ary motera fanaovana tatitra izay mahatonga ny fananganana vokatra ho lafo sy haingana. Tsy lazaina intsony ny isan'ireo lafo vidy API mpanelanelana amin'ny programa fampiharana) eny an-tsena. Ny mpandrindra tokana dia afaka manamboatra sehatra miaraka amina sehatr'asam-pitantanana am-bifotsy ary mifandray amin'ny API ao anatin'ny minitra vitsy.
Noho ireo antony ireo dia navadikay tamin'ny fomba maro ny fijoroantsika. Ohatra roa tiako hozaraina:
CircuPress - Rehefa namoaka ny mailaka nataoko tamina mpanjifa an'aliny aho dia nandany vola bebe kokoa tamin'ny mpamatsy mailaka noho ny vola azoko tamin'ny fidiram-bolan'ity tranonkala ity. Vokatr'izany dia niara-niasa tamin'ny namako aho mba hamolavola sehatra marketing amin'ny mailaka izay tafiditra ao anaty WordPress. Mandritra vola kely isam-bolana dia mandefa mailaka ana hetsiny aho. Andro vitsivitsy dia hatolontsika ho an'ny rehetra izany!
SEO Data Miner - Highbridge nanana mpanonta be dia be izay manana teny fanalahidy mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa izay mila arahana ara-jeografika, amin'ny marika, ary amin'ny lohahevitra. Ireo mpanome tolotra rehetra any izay hiatrika an'io dia ao amin'ny tarehimarika dimy avo lenta ho an'ny fahazoan-dàlana - ary tsy misy amin'izy ireo afaka mahazaka ny habetsaky ny angona ananany. Ary koa, manana tranokala sy modely orinasa tsy manam-paharoa izy ireo izay tsy tafiditra amin'ny sehatra am-bifotsy. Noho izany, ho an'ny vidin'ny fahazoan-dàlana amin'ireo rindrambaiko hafa, afaka namokatra sehatra iray manokana ho an'ny maodelin'ny orinasan'izy ireo izahay. Ny fampiasam-bola rehetra ataon'izy ireo dia tsy fampiasam-bola amin'ny fahazoan-dàlana hialany - manatsara ny sehatr'izy ireo izany ary mahomby kokoa ao anatiny. Mitahiry fotoana famakafakana sy fanodinana sarobidy izy ireo amin'ny alàlanay amin'ny fananganana ny sehatra ho azy ireo.
Agent saosy - novolavolain'ny namako, Adam, nandritra ny folo taona lasa, ny maodely Agent Sauce dia fitambarana modules feno - avy amin'ny tranonkala, pirinty, mailaka, finday, fikarohana, sosialy, ary koa ny horonan-tsary. Nampiasa serivisy mailaka i Adam ary nanana fotoana sarotra niasa tamin'ny fameperana ny rafitr'izy ireo, koa nanangana ny azy izy! Izy koa dia manome herinaratra ny sehatra misy azy miaraka amin'ny API maro, manome vahaolana mora vidy izay an-jatony na an'arivony dolara amin'ny indostria hafa. Agent Sauce dia mandefa mailaka an-tapitrisany sy hafatra an-jatony an'arivony ho an'ny denaria amin'ny dolara. Adam dia afaka nampita ireo tahiry ireo mivantana tamin'ny mpanjifany.
Ohatra vitsivitsy fotsiny ireo izay, raha tokony hanome alalana sehatra mahazatra misy fetrany faran'izay henjana, ireo vahaolana ireo dia natsangana tao anaty rahona, ary indraindray nampiasa API tena matanjaka. Ny interface interface dia namboarina manokana ho an'ny fampiharana sy ny mpampiasa, ary novolavolaina ny fizotrany mba hahazoana antoka fa afaka manao ny zava-drehetra ny mpampiasa raha tsy mandany fotoana be loatra handany data na hiasa momba ny olana eo amin'ny lampihazo.
Aza atao ambanin-javatra ny ezaka hatao
Misy maningana. Noho ny antony sasany, orinasa maro no misafidy ny hanangana ny azy manokana Content Management System ary mivadika nofy ratsy. Izany dia satria ataon'izy ireo ambanin-javatra ny habetsaky ny asa ilaina sy ny isan'ny fiasa izay ananan'ireo rafitra ireo izay manamora ny fanaovana optimise tranokala ho an'ny fikarohana sy haino aman-jery sosialy. Mila mitandrina tsara ianao amin'ny fanombatombanana sehatra izay mety tsy anananao traikefa. Ohatra, rehefa nanangana serivisy mailaka anay manokana izahay dia efa manam-pahaizana momba ny fandefasana mailaka sy ny fandefasana mailaka… ka noheverinay ireo fiasa fanampiny ireo.
Ireo efficiencies ireo no misy ny tahiry ho an'ny orinasa. Azonao atao ny mijery an'io rehefa mamakafaka ny teti-bolanao. Aiza ny vidin'ny fahazoan-dàlana lehibe indrindra anao? Ohatrinona ny vola vidinao amin'ny fiasanao ny fetran'ireo sehatra ireo? Karazan-tahiry sy fahombiazana inona avy no ho tsapan'ny orinasanao raha toa ka namboarina mifanaraka amin'ny ilainao ny sehatra fa tsy ny tsena iray manontolo? Raha nandany ny vidin'ny fahazoan-dàlana amin'ny fampandrosoana isan-taona ianao, inona no haingana azonao atao amin'ny sehatra mahazatra sy tsara noho ny vahaolana amin'ny tsena?
Ity no fotoana hanombohana manapa-kevitra raha hanohy mividy vahaolana hafa ianao, na hanangana sangan'asa fantatrao fa afaka manitsaka ny lasantsy ianao na tsia!
Tags: saosy mpandraharahaAPImanangana sehatra mailakamanangana na mividymanangana seo sehatravidin'ny fampandrosoanavidin'ny fanananavidin'ny fampandrosoanafampidiranavidin'ny fananana
Antony tokony hahatongavan'ny CEO anao eo amin'ny media sosialy